Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. नेपालमा ६ सय मानिस ‘थालेसीमिया’ रोग संक्रमित – Emountain TV
नेपालमा ६ सय मानिस ‘थालेसीमिया’ रोग संक्रमित
काठमाडौं, २५ बैशाख । थालेसीमिया अर्थात अपुष्ट रक्तकोष । रगत सम्बन्धी हुने विभिन्न रोगहरुमध्येको एउटा वंशाणुगत रोग हो । थालेसीमिया रोग र यसका बिरामीहरुको बारेमा हालसम्म पनि नेपालमा कुनै अध्ययन भएको छैन । तर, नेपालभर कम्तीमा ६ सय मानिस थालेसीमियाको संक्रमण रहेको अनुमान गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय थालेसिमिया दिवस, नेपालमा पनि जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरी मनाइयो । थालेसीमिया रोग र यसका बिरामीहरुको बारेमा हालसम्म पनि नेपालमा कुनै अध्ययन भएको छैन । तर, नेपालभर कम्तीमा ६ सय मानिस यो रोगको संक्रमण रहेको अनुमान गरिएको छ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले अबका दिनमा भने यो रोगको नियन्त्रण गर्न सरकारले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।
हाल नेपाल थालेसीमिया सोसाईटीमा २ सय २५ जना यस्ता बिरामी दर्ता भएको उक्त संस्थाले जनाएको छ । ती बिरामी मध्ये १ सय ३५ जना बिरामीहरुले नियमित रगत चढाइरहेका छन् । संस्थामा आवद्ध भएका बिरामीलाई संस्थाले निःशुल्क रगत तथा रगत चढाउने सेवाकासाथै चिकित्सकीय उपलब्ध गराइरहेको छ । थालेसीमियाका रोगका रोगीहरुलाई बचाउनका निम्ति आजीवन रगत तथा अन्य औषधी दिइरहनुपर्छ । सरकारले निःशुल्क रगत चढाउने व्यवस्था गरिदिए र औषधी उपलब्ध गराईदिए सहज हुने थालेसिमियाका बिरामीहरुको भनाइ छ ।
बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट, जीन थेरापी आदि उपचार पद्धतीबाट यो रोगको उपचार गर्नसके पूर्ण रुपमा निको हुन्छ । तर, बोनम्यारोको म्याच पाउन निकै दुर्लभ हुने चिकित्सकहरुको भनाइ छ । बोनम्यारोको म्याच पाइए पनि उपचारको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ ।
यो रोगका लक्षणहरु भनेको बच्चा नफस्टाउनु, पेट ठूलो हुँदै जानु, हातखुट्टा सुक्दै जानु, नङ, हत्केला, पैताला, ओठ र आँखा सेतो हँुदै जानु, बच्चामा रगतको कमी देखिनु हो । यो वंशाणुगत रोग भएकाले बाबु तथा आमा दुवै तर्फका पुर्खाहरुबाट सर्दै आउँछ । यो रोग लाग्न नदिन सकेसम्म विवाह पूर्व र ढिलोमा बच्चा गर्भमा आउनुपूर्व थालेसीमिया संवाहक हो या होइन भनी आफ्नो रगत परीक्षण गराउन चिकित्सकहरुले सुझाव दिएका छन् ।
जन्डिस तथा आँखाका विभिन्न रोगबाट यसरी बचौँ, घरेलु उपचार सहित (भिडियोसहित)
विशेषज्ञको अभावमा जेष्ठ नागरिकको उपचार चुनौतीपूर्ण
थाइराईडसम्बन्धि राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी
नेपालमा वंशाणुगत रोगका कारण हजारौँको मृत्यु
ब्रेन अट्याकको नयाँ उपचार भित्रियो, चार घण्टा भित्र उपचार (भिडियोसहित)
गुलियो खाएर दाँतलाई हानी हुन्छ भन्ने दिन गए, यसरी हेरचाह गर्नुहोस् (भिडियोसहित)